Ogaden News Agency (ONA) – Ana Gomes oo Mar Kale Kahadashay Xaalada Itoobiya.
Ana Gomes oo Mar Kale Kahadashay Xaalada Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ November 1, 2017
Ana Gomes oo ah xubin sare oo kamid ah baarlamaanka Midowga Yurub ayaa sheegtay in gabi ahaanba wadanka gumaysiga Itoobiya uu umuuqdo mid burburaya, waxayna Ana Gomes soo daliishatay cadaymo dhowr ah.
Ana Gomes oo kamid ah dadka naqdiya siyaasada guracan ee kooxda TPLF ayaa sheegtay in waanka Itoobiya uu hulaaqayo isla markaana siyaasad xumida kooxda TPLF ay gaadhay meeshii ay sanado badan kahor kadigtay.
Ana Gomes ayaa sheegtay in ay shakhsiyan kamid ahayd goob joogayaashii loodiray doorashadii wadanka kadhacaysay sanadkii 2005, taas oo sida ay sheegtay ay ku ogaatay xaqiiqada dhabta ah ee wadanka kajirta iyo sida loogu afduuban yahay xisbiga EPRDF/TPLF.
Marwo Ana Gomes ayaa sheegtay in doorashadaas ay goobjooga ka ahayd lagu dilay dad aad ufarabadan oo shacab ah kuwaas oo sida ay sheegtay doonayay in ay doortaan qofka ay iyagu rabaan waxayna Mrs Ana sheegtay in aan laga hadlin laynta shacabka.
Ana Gomes ayaa wadamada ree galbeedka ku eedaysay in ay dhagaha kafuraysteen dhibaatada shacabka Itoobiya kudhaqan lagu hayo waxayna sheegtay in guud ahaanba wadanka ay tacadiyadu kanoqdeen kuwo iska caadi ah.
Sidoo kale haweenaydan oo aad ula socota xaalada wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegtay in loobaahan yahay in maxkamad lasoo taago Simun Berekat oo tacadiyo badan ugaystay shacabka ree Itoobiya hadana kusugan wadanka Maraykanka oo uu ubaxsaday.